အင်္ဂလိပ်မြန်မာ အဘိဓန် ~ မိုးညိုသား
1:54 AM နည်းပညာ( ကိုညီနေမင်းစီက ယူလာတာပါ)2comments
english - myanmar - english Dictionary (wxPyDict)
4:16 PM ညီနေမင်3းcomments
english - myanmar , myanmar-english dictionary ပါ . နှစ်မျိုးစလုံးသုံးလို့ရပါတယ် . ctrl + shif နှိပ်ပြီးတော့ ပြောင်းသုံးနိုင်ပါတယ် . ကျွန်တော်ကတော့ သဘောကျပါတယ် . စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ အဆင်ပြေမယ် ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေနိုင်ပါစေဗျာ . ကဲ အောက်မှာ download လုပ်ယူလိုက်ပါ ( ကိုညီနေမင်းစီက ယူလာတာပါ မူရင်းဆိုဒ်ကတော့ www.nyinaymin.org ပါ)
မိုး .. December 13, 2012 at 3:47 AM
ကျနော်လည်း မိုးညိုသားပါ အကိုက ဘယ်မိုးညိုလည်းမသိ့ဘူး
မိုးညိုသားလေး February 1, 2013 at 3:18 AM
ကျွန်တော်က ပဲခူးတိုင်း အနောက်ပိုင်း သာယာဝတီခရိုင်ကပါ။ မင်းလှ- မိုးညိုပါ